OPDO Qormaata Maastara Plaanii Kufe. -
(Oromedia, Finfinnee, 14 Muddee 2015) OPDOn dhimma maastar pilaanii irratti hojii manaa itti kenname waan hin hojjanneef, qoraamata kufuun dhagayame.
Marii Faanaa kana irratti itti gaafatamaan wajjira koree jiddu galeessaa Dhaabbata Demokraatawaa Ummata Oromoo obbo Dhaabaa Dabalee, kantiibaan bulchinsa Magaalaa Finfinnee obbo Dirribaa kumaafi ministirri itti gaafatamaan waajjira dhimmoota koomunikeeshinii Mootummaa obbo Getaachaw Raddaa hirmaatuun dubbii OPDO qeequu fi doorsisuu kana belbelchaa jiran.
Obbo Getaachoon humnoonni dhiphoonni bu’aa Naannoo Oromiyaa keessatti galmeeffamaa tureen Dhaabbata Demookraatwa Ummata Oromootiif beekkamtii kennuu diduudhaan kaayyoosaanii milkeeefafchuuf socho’anis hin milkaa’uuf jedhaniiru.
Obbo Getaachoo Raddaa akka jedhanitti “gaaffiin seera qabeessi ummanni kaase faayidaa humnoota farra Nagaatiif akka hin oolleef hojjetamuu qaba,” jedhaniiru.
Itti gaafatamaan waajjira koree jiddu galeessaa Dh.D.U.O obbo Dhaabaa Dabalee gamasaaniitiin “humnoonni dhiphoonniifi of tuultoonni dhimma maastar pilaanii da’oo taasifachuudhaan socho’aa jiru, jechuun akka TPLF dafee dhaqqabuuf waamicha dabarfate.
Itti dabaluunis, Oromiyaan dheebuu bulchiinsa gaariitiin dararamaa akak jirtu yeroo ibsu, “Naannoo Oromiyaatti bulchiinsa gaarii mirkaneessuuf qophiin gahaan taasifamaa jira,” jedhee akka aangoo irra turfamuuf gaafatate.
Dhimma maastar pilaanii qindaawaa irratti immoo, “ummata wajjin mari’achuuf qophiin taasifamaa wayita jirutti,”nutti ddulan jechuun qeeqaa fi duula EPRDF/TPLF ofirraa qabuuf yaale.
Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee obbo Diriibaa Kumaa, gama isaatiin, “bu’aa maastar pilaaniin argamsisu irratti hojiin hubannoo uumuu hin hojjatamne,” jechuun ergama isaa bahachuuf yaale. Akka inni jedhutti, kun kan hanqateef, “sababa hojiiwwan adda addaatiin duubatti harkifate”, jedhe.
Previous Silent Forces behind the Addis Ababa Master Plan and the Downside of Article 49 (5) of the FDRE Constitution
Next Breaking news: Voice of Oromiyaa reporting current situation of Oromo students struggle for freedom!